မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကြွေကျသွားအောင် ဈေးဗန်းခင်းလိုက်တဲ့ တိုင်ရွန် – Cele Zone
မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေကြွေကျသွားအောင် ဈေးဗန်းခင်းလိုက်တဲ့ တိုင်ရွန်
မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့သည်းသည်းလှုပ်ဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့ အနုပညာရှင် မင်းသားချောလေး တိုင်ရွန်ကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ။ အမိုက်စား ဘော်ဒီနဲ့ ဖမ်းစားထားတဲ့တိုင်ရွန်ကတော့ သူ့ရဲ့အမိုက်စား တက်တူးတွေနဲ့ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကိုခြွေနေတဲ့ ပရိသတ်အသည်းကျော်မင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးနေပြီး သူ့ရဲ့အနုပညာအသစ်တွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ကြိုးစားနေတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။
အလန်းစားဘော်ဒီနဲ့အမိုက်စားတက်တူးတွေကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေ သည်းသည်းလှုပ် ဝန်းရံခြင်းခံနေရပေမယ့် အချစ်ရေးမှာတော့ တစ်ကိုယ်တည်း စင်ဂယ်ဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းနေခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလို တိုင်ရွန်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ဈေးဗန်းခင်းလေ့ရှိပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ အခုလက်တလောမှာလည်း ” နင့်ကောင်လေးကချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာဆိုတာထက် နင့်ကိုကြီးက မိုက်လိုက်တာဆိုတာမျိုးဘဲဖြစ်စေရမယ် ညီမလေး……. မဆိုရင်မောင်ပေါ့ ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကို အသည်းကြွေအောင် ဈေးဗန်းခင်းလိုက်ပြန်ပါပြီ ။
ဈေးဗန်းခင်းဖို့အတွက် အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးထားသလို သူ့ရဲ့ပုံတွေအောက်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေက သည်းသည်းလှုပ်အားပေးဝန်းရံနေကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ အဝင်းကိုချစ်တဲ့ Cele Zone ပရိသတ်ကြီး အတွက် အဝင်းရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source :Tyron Bejay
မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြေႂကြက်သြားေအာင္ ေဈးဗန္းခင္းလိုက္တဲ့ တိုင္႐ြန္
မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕သည္းသည္းလႈပ္ဝန္းရံျခင္းခံရတဲ့ အႏုပညာရွင္ မင္းသားေခ်ာေလး တိုင္႐ြန္ကေတာ့ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြဆက္တိုက္ဆိုသလို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ။ အမိုက္စား ေဘာ္ဒီနဲ႔ ဖမ္းစားထားတဲ့တိုင္႐ြန္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အမိုက္စား တက္တူးေတြနဲ႔ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အသည္းကိုေႁခြေနတဲ့ ပရိသတ္အသည္းေက်ာ္မင္းသားေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးေနၿပီး သူ႔ရဲ႕အႏုပညာအသစ္ေတြကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပါ ။
အလန္းစားေဘာ္ဒီနဲ႔အမိုက္စားတက္တူးေတြေၾကာင့္ မိန္းကေလး ပရိသတ္ေတြ သည္းသည္းလႈပ္ ဝန္းရံျခင္းခံေနရေပမယ့္ အခ်စ္ေရးမွာေတာ့ တစ္ကိုယ္တည္း စင္ဂယ္ဘဝနဲ႔ျဖတ္သန္းေနခဲ့တာပါ ။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခဏဆိုသလို တိုင္႐ြန္တစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာထက္ကေန ေဈးဗန္းခင္းေလ့ရွိပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ ..။ အခုလက္တေလာမွာလည္း ” နင့္ေကာင္ေလးကခ်စ္စရာ ေကာင္းလိုက္တာဆိုတာထက္ နင့္ကိုႀကီးက မိုက္လိုက္တာဆိုတာမ်ိဳးဘဲျဖစ္ေစရမယ္ ညီမေလး……. မဆိုရင္ေမာင္ေပါ့ ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ႕အတူ နႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြကို အသည္းေႂကြေအာင္ ေစ်းဗန္းခင္းလိုက္ျပန္ပါၿပီ ။
ေစ်းဗန္းခင္းဖို႕အတြက္ အမိုက္စား ပံုရိပ္ေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြကိုမွ်ေ၀ေပးထားသလို သူ႕ရဲ႕ပံုေတြေအာက္မွာေတာ့ နႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြက သည္းသည္းလႈပ္အားေပး၀န္းရံေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ အ၀င္းကိုခ်စ္တဲ့ Cele Zone ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ အ၀င္းရဲ႕ အမိုက္စားပံုရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္ ။
ချစ်သူဘေဘီမောင်နဲ့အတူ ကြည်နူးစွာသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သားဂန်းရဲ့သီချင်းအသစ်
တရုတ်သံရုံးရှေ့မှာ ဝတ်စုံအပြည့်ဝတ်ကာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန်